Indlela Yokufundisa Unqulo Kubantwana Bokuba Ngabazali Abangakholwayo
Yintoni Ndifanele Ndixelele Abantwana Bami Ngeenkolo?
UThixo kunye nezingane
Xa abantwana bephakanyiswa kwimeko yonqulo, oko bafundiswa malunga nenkolo kuyacaca kwaye kuhleliwe - kodwa kuthekani malunga nezingane ezikhuliswe kwindawo engekho yonqulo? Ukuba awufundanga ngokucacileyo abantwana bakho ukuba bakholelwe kunoma naluphi na oothixo okanye ukulandela nayiphi na inkqubo yezenkolo, oko kungase kube nzima ukuba ungayithobeli ngokupheleleyo isihloko.
Kodwa ke, mhlawumbi, mhlawumbi kuya kuba yimpazamo. Awukwazi ukulandela naluphi na unqulo kwaye unokuba nolonwabo ngakumbi xa abantwana bakho bangalandeli naluphi na unqulo, kodwa oko akutshintshi ukuba inkolo ibaluleke kakhulu kwenkcubeko, ubugcisa, ezopolitiki kunye nobomi babantu abaninzi abantwana bakho baya ukudibana kunye neminyaka.
Ukuba abantwana bakho bengazi ngokuphathelele inkolo, baya kulahleka kakhulu.
Enye, mhlawumbi ingakumbi, ingxaki yokunyaniseka inkolo ibonisa indlela abaya kusabela ngayo kwinkolo xa bekhulile ngokwaneleyo ukwenza izigqibo zabo. Ukuba abaqhelekanga kwiinkqubo zenkolelo zenkolo, ngoko baya kuba yinto elula kubashumayeli malunga naluphi na ukholo. Abantwana bakho baya kuba bengenazo izixhobo zengqondo eziyimfuneko ukuze baqonde ngokupheleleyo kwaye bavavise oko bakuvayo, okwenza kube lula ukuba bafumane inkolo ephawulekayo kunye / okanye eyona nkolo.
Ngoko ukuba kuyilungileyo ukufundisa ngokuphathelele inkolo, kufuneka yenziwe njani? Indlela efanelekileyo yokuhamba ngolu hlobo kukuba kube lula kunye nenjongo kunokwenzeka. Kufuneka uchaze, usebenzisa izinto ezifanelekileyo ubudala, nje into ekukholelwa ngayo abantu. Kufuneka ujonge nokufundisa malunga neenkolo ezininzi kunokuba unamathele kunqulo oluphambili kwinkcubeko yakho.
Zonke ezi nkolelo kufuneka zichazwe ngecala, nangaphandle kweenkolelo ezivela kwiinkonzo zamandulo ngoku zihlala ziphathwa njenge-mythology. Ngethuba ongenalo ilungelo lunye inkolo kunolunye, ke abantwana bakho akufanele bafumane.
Xa abantwana bakho bekhulile ngokwaneleyo, kusenokuba yinto efanelekileyo yokubayisa kwiinkonzo zonqulo zamaqela ahlukeneyo enkolo ukwenzela ukuba bakwazi ukuzibona ngokwabo nje oko abantu abakwenzayo.
Akukho nxaxheba endaweni yamava lokuqala, kwaye ngolunye usuku banokuzibuza ukuba kunjani phakathi kwecawa, kwesikhungu, okanye kwi-mosque - bhetele ukuba bafumana kunye nawe ukuze uxoxe ngazo emva koko.
Ukuba uloyiko lokuba ngokufundisa ngenkolo uya kubafundisa ukuba ube nokholo kwinkolo ethile, akufanele uxhalabele. Abantwana bakho banokufumana oku okanye ukuba inkolo ibe yinto enomdla kakhulu, kodwa inyaniso yokuba ubonisa iinkolelo ezininzi njengokuba zilinganayo, kungabikho mntu ufanelekela ukukholelwa ngaphezu kwanoma yimuphi umnye, okwenza ukuba akunakwenzeka ukuba bayakufumana ngokungavumelani nayiphi na loo mfundiso ngendlela efanayo nomntwana okhuliswa ngokukodwa ukulandela isithethe esithile senkolo.
Ngakumbi abayaziyo malunga neenkolelo zeenkolelo zeenkolelo ezahlukileyo kunye novelwano ngakumbi kwiqela ngalinye likholelwa ngokunyanisekileyo nangokunyanisekileyo ezi ngcamango ezingahambelaniyo, kungenakwenzeka ukuba baqale ukuwamkela nayiphi na isethi sezo zibango ukukhutshwa abanye. Le mfundo kunye namava, ngoko ke, kakhulu inoculation ngokuchasene nemigqaliselo kunye ne-dogmatism.
Ukugxininisa ekucingeni okubalulekileyo kubalulekile, ngokucacileyo. Ukuba ukhulisa abantwana bakho ukuba bangathembeki njengomgaqo-jikelele, akufuneki ukuba kufuneke ukuba uphume ngendlela yakho ukuze ubaphathe ngamabango enkolo ngokuzenzekelayo - kufuneka baphephe ukwenza oko ngokwabo.
Ukungaqiniseki nokucinga okucwangcisekileyo yizinto ezifanele zihlwayelwe kuzo zonke izihloko, kungekhona into ekugxilwe kuyo inkolo kwaye zikhohlwe ngenye indlela.
Ukugxininiswa kwintlonipho kubalulekile. Ukuba, ngokomzekelo okanye ukuyila, ufundisa abantwana bakho ukuba bagcuke ngamakholwa , uya kubaphakamisa kuphela ukuba baxhatshazwe kwaye bahluthwe. Akunjalo ukuba bamkele okanye bavumelane kunye nokuba neenkolelo zonqulo zabanye, kodwa akufanele bawenze iphulo lokuphatha amakholwa ngokungathi abafanelanga inhlonipho efanayo kunye nabangakholwayo. Oku akuyi kubasindisa kuphela kwiingxabano ezingadingekile, kuya kubabangela abantu abangcono.
Ngaba abantu abakholelwa ku-Rational More Rational kune-Theists?
Ukufundwa kweenkwenkwezi kunye Neengqondo: Kutheni Abantu Bakholelwa?
Inkcubeko kunye noLwazi lwaBantu
Huehueteotl, uThixo woBomi kwi-Aztec Religion, Mythology
I-Ah Mucen Cab, uThixo wezinyosi kunye noju kwiNkolo yamaMeyi
I-Biography Profile yeSocrates
Iinkcazo zeexical Bonisa indlela iLizwi elisetyenzisiweyo ngayo
Imfazwe Yehlabathi II: Grumman F6F Hellcat
Yintoni i-Odyssey White Hot 2-iBlue Putter?
Iifilimu eziPhezulu kakhulu eziPhezulu zeZonke ixesha
Ukuvukela kwamaFries ka-1799
Imbali emfutshane yee-3-D zeHorror Movies
Iintlobo zeBhalen Whales
Inzululwazi emva kokuzamazama komhlaba kweHaiti ka-2010
Amagama ezinyangeni zeKhalenda yamaYuda
I-Sarah Josepha Hale I-Thanksgiving Letter
Biography ye Nagarjuna
I-Biomes yomhlaba: i-Tundra